Neymar oo karbaashay Di Maria [Sawir] – Gool FM
Neymar oo karbaashay Di Maria [Sawir]
(Barcelona) 11 Mar 2017. Wali ma dhicin xiisiihii taariikhiga ahaa ee kulankii Barcelona iyo Paris Saint – Germain.
Barcelona waxa ay ka soo laabatay natiijo 4-0 ahayd oo looga soo badiyey Perc de Princes lugtii hore ee wareega 16ka Champions League balse waxa ay si lala yaabay ugu soo baxday 6-1 is aragii labaad ee ka dhacay Camp Nou.
Ciyaarta oo ay Barca ku hogaamineyso 3-0 ayaa waxaa gool u dhaliyey PSG Edison Cavani taas oo ceel ku sii riday rajadii Calatans, intii ay ku jireen dabaal daga waxaa la arkayey Di Maria oo aamusiinaya jamaahiirta 100-ka kun kor u dhaafayey ee Barcelona.
Hase ahaatee, laga bilaabo daqiiqadii 88aad wax walba wey is badaleen waxaana la sameeyey taariikh aan abid uga dhicin Champions League-ga.
Neymar oo ahaa curiyihii sooyaalka ayaa u jawaabay Di Maria waxa uuna soo dhigay Instagram-kiisa sawir uu afka farta saarayo – dabcan waa jawaab ku socota Argentinian-ka! Mise waa karbaash!?
XOG: Eden Hazard ayaa ka fiican Neymar iyo Messi